ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ - Home | Facebook
See more of ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ on Facebook
8,736 people like this
ဒီကနေ့ည ၁နာရီ ၁၅မိနစ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကောင်း တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Real Madrid - Manchester City တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရအောင် ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဗီဒီယိုလင့်ခ်တွေကို ပွဲစဉ်မတိုင်မှီ ၁၅မိနစ်အလို http://www.myanmarfootballlive.com Website မှာ တင်ပေးသွားမှာပါ။ စီရော်နယ်ဒိုကလည်း ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ဖို့ သေချာနေပြီဆိုတော့ တော်တော်ကြည့်ကောင်းမည့် ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်း ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်...................
နံနက် ၁ နာရီ ၁၅
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်လင့်များ လင့်ခ်တွေက ပျက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပျက်သွားတဲ့လင့်ခ်အစား အခြားလင့်ခ်တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲတင်ပေးသွာမှာပါ။
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ shared Tshirt Red-line's photo.
TSHIRT REDLINE WORLD CUP 2014 SPECIAL SHOW !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tshirt Red-line Brasil World Cup အကျီများ နှင့် ကလပ်အသင်းအကျီများကို အထူးဈေးနှုန်း ၄၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် တပ်မတော်ခန်းမ ( Education and Career Show ) တွင်ပြသရောင်းချပေးလျှက်ရှိနေပါကြောင်း
Tshirt Red-line Brasil World Cup အကျီများ နှင့် ကလပ်အသင်းအကျီများကို အထူးဈေးနှုန်း ၄၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် ...တပ်မတော်ခန်းမ ( Education and Career Show ) တွင်ပြသရောင်းချပေးလျှက်ရှိနေပါကြောင်း Tshirt Red-line ရဲ့ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များကို ဖိတ်ကြားလိုက်ရပါသည် ခင်ဗျာ။ ၂၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်ရက်တည်းသာ ၆၀၀၀ကျပ် tshirt အား ၄၀၀၀ကျပ်ဖြင့် အရယူလိုက်ပါ..................
တည်နေရာ - တပ်မတော်ခန်းမ
SPECIAL HOT SALES
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ shared Myanmar journal download's photo.
ဘရာဇီ်းလ် - ခရိုအေးရှား - မနက် ၂ နာရီ ခွဲ
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ shared Barbarnyarnyar's post.
Barbarnyarnyar added4new photos.
ပိုမိုဖတ်ရှုရန် လင့် -
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ addedanew photo.
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ added3new photos.
Tshirt Redline မှ FA Cup Final အထူး အစီအစဉ်
(6-5-2014) မှ (17-5-2014) အထိ
လာမည့် ၁၇-၅-၂၀၁၄ (စနေနေ့ ) ကန...်မယ့်
အာဆင်နယ် - ဟူးလ်စီးတီး ပွဲ အတွက်
အထူးအစီအစဉ် အနေနဲ့ အာဆင်နယ် တံဆိပ်ပါ အကျီ ကို မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
လက်ဆောင်ရဖို့ က မိနစ် ၉၀ အတွင်း ဂိုး ရလဒ် နဲ့ ဂိုးသွင်းသူ တစ်ယောက်ကို ခန့်မှန်း ပေးရုံပါပဲ ။
ဂိုးရလဒ် - အာဆင်နယ် ၂ - ၁ ဟူးလ်စီးတီး
ဂိုးသွင်းသူ - ပိုဒေါစကီး
( မိနစ် ၉၀ အတွင်း ၀-၀ သရေ ရလဒ် ခန့်မှန်းပါက ဂိုးသွင်းသူ အမည်ကို ရေးရန် မလိုပါ )
အဖြေမှန် သူများ ထဲမှ အချိန် အစောဆုံး ဖြေဆိုနိုင်သူ ငါးဦး ကို အကျီ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဖြေကို ယခု Post အောက်မှာ comment ပေးခဲ့ရုံပါပဲ ။
စည်းကမ်းချက်များ အနေဖြင့် -
၁ - #Tshirtredline facebook ကို like လုပ်ရပါမည် ။
၂ - အဖြေကို Edited ပြန်လုပ်သည့် comment များ အကျုံးမ၀င်ပါခင်ဗျာ ။
၃ - အချိန်အားဖြင့် (၁၇-၅-၂၀၁၄) မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ငါးနာရီ အထိ သာ ဖြစ်ပြီး ငါးနာရီ နောက်ပိုင်း comment များ အကျုံးမ၀င်ပါ ခင်ဗျာ ။
၄ - ခန့်မှန်းချက် မှန်သူများပြားနေပါက အချိန် အစောဆုံး ဖြေဆိုနိုင်သူ ငါးဦး သာ မေတ္တာလက်ဆောင် အကျီ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
၅ - အကျီကို ၁၉-၅-၂၀၁၄ နေ့မှာ Tshrit Redline ရုံးမှာ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ။
၆ - တစ်ယောက်ကို comment တစ်ကြောင်းသာ ခန့်မှန်းရမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ကြောင်း ထက်ပို ခန့်မှန်းထားသူ များ ပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Facebook : https://www.facebook.com/Tshirtredline
Website : http://www.tshirtredline.com
Tel : 09 3611 6592
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ via Myanmar journal download
Myanmar Tv Channel | SCTV
မြန်မာ TV Channel များကို စုစည်းထားသော www.MyanmarTvChannel.com
Japanese Sexy Girls 2
YOU'LL NEVER WALK ALONE.................ဒီဇိုင်းနဲ့LIVERPOOLအကျီလေးကို Preorder မှာယူလို့ ရနေပြီနော် အရောင်- အဖြူ , အနက် Size- Xsmall , Small , Medium ဆက်သွယ်ရန် - 0936116592 တစ်ထည် - ၆၀၀၀ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ်မှ မှာယူလိုသူများ အိမ်တိုက်ရာရောက်စနစ် တစ်ထည်၇၅၀၀ (သုံးထည်အနည်းဆုံးမှာယူရမည် ) , နယ်မှမှာယူလိုသူများ ၅ထည်နှင့်အထက် တစ်ထည် ၇၅၀၀ ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ T-shirt Redline onlinestore - http://www.tshirtredline.com/
၀ိန်းရူနီ ခရေဇီတွေအတွက် T-shirt အကျီလေးတွေ PreOrder မှာလို့ရနေပြီနော် အရောင်- အဖြူ , အနက် Size- Xsmall , Small , Medium ဆက်သွယ်ရန် - 0936116592 တစ်ထည် - ၆၀၀၀ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ်မှ မှာယူလိုသူများ အိမ်တိုက်ရာရောက်စနစ် တစ်ထည် ၇၅၀၀ (သုံးထည်အနည်းဆုံးမှာယူရမည် ) , နယ်မှမှာယူလိုသူများ ၅ထည်နှင့်အထက် တစ်ထည် ၇၅၀၀ ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ T-shirt Redline onlinestore - http://www.tshirtredline.com/
ဘောလုံးလောက ဓါတ်ပုံများ shared Tshirt Red-line's post.
Tshirt Red-line added3new photos.
Tshirt Redline မှ ချန်ပီယံ လိဂ် အထူး အစီအစဉ် (1-4-2014)
မန်ယူ - ဘိုင်ယန် ပွဲ အတွက် ခန့်မှန်း ခြင်း အစီအစဉ် ယနေ့ ည ကိုးနာရီမှာ comment ဖြင့် ခန့်မှန်းခြင်း ပြီးဆ...ုံးပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ မှ ည ကိုးနာရီ အထိ စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းသူပေါင်း ၄၂ ယောက်ရှိပါတယ် ။ Screenshot ဖြင့် ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။
အချိန် အစောဆုံး နဲ့ ရလဒ် အတိအကျ မှန်သူ နှစ်ယောက် ကို သူရဲနီ အကျီ နှစ်ထည် မေတ္တာ လက်ဆောင် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အစောဆုံး နဲ့ အဖြေမှန်သူ နှစ်ယောက် ကို မနက်ဖြန် မနက် ၁၁ နာရီမှာ ကြေငြာပေးပါမယ် ။
လက်ရှိ comment ရေးထားသူ ၄၂ ယောက်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် ။
မနက်ဖြန် ၂-၄-၂၀၁၄ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မနက် အစောကြီး ကန်မယ့်
မန်ယူ - ဘိုင်ယန် ပွဲ အတွက် ...
အထူးအစီအစဉ် အနေနဲ့ မန်ယူ သူရဲနီ လိုဂို တံဆိပ်ပါ အကျီ ကို မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
မနက်ဖြန် ၂-၄-၂၀၁၄ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မနက် အစောကြီး ကန်...မယ့်
မန်ယူ - ဘိုင်ယန် ပွဲ အတွက်
လက်ဆောင်ရဖို့ က ဂိုး ရလဒ်ကို ခန့်မှန်း ပေးရုံပါပဲ ။
ဥပမာ - မန်ယူ ၂ - ဘိုင်ယန် ၁
အဖြေမှန် သူများ ထဲမှ အချိန် အစောဆုံး ဖြေဆိုနိုင်သူ နှစ်ဦး ကို အကျီ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
၁ - အဖြေကို Edited ပြန်လုပ်သည့် comment များ အကျုံးမ၀င်ပါခင်ဗျာ ။
၂ - အချိန်အားဖြင့် ယနေ့ (၁-၄-၂၀၁၄) မြန်မာစံတော်ချိန် ည ကိုးနာရီ အထိ သာ ဖြစ်ပြီး ကိုးနာရီ နောက်ပိုင်း comment များ အကျုံးမ၀င်ပါ ခင်ဗျာ ။
၃ - ခန့်မှန်းတာ မှန်သူများပြားနေပါက အချိန် အစောဆုံး ဖြေဆိုနိုင်သူ နှစ်ဦး သာ မေတ္တာလက်ဆောင် အကျီ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
၄ - အကျီကို လာမယ့် သောကြာနေ့ Tshrit Redline ရုံးမှာ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ။
၅ - တစ်ယောက်ကို comment တစ်ကြောင်းသာ ခန့်မှန်းရမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ကြောင်း ထက်ပို ခန့်မှန်းထားသူ များ အကျုံး မ၀င်ပါ ခင်ဗျာ ။
စံချိန်တင် အစောဆုံး ဂျာမန်ချန်ပီယံ ဖြစ်လာသည့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်"
ဂျာမန်ချန်ပီယံ အသင်းသည် ဘောလုံးရာသီကုန်ရန် အမှတ်ပေးပွဲစဉ် (၇)ပွဲ ကျန်နေသေးချိန်တွင် ဆုဖလားအတွက် သေချာသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟာသာဘာလင်အသင်းပိုင် အိုလံပီယာကွင်းကြီးတွင် အိမ်ရှင်တို့အား (၃-၁)ဖြင့် ချေမှုန်းပြီးနောက် ဘိုင်ယန်တို့ အနေဖြင့် (၂၄)ကြိမ်မြောက် ဂျာမန်ချန်ပီယံဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
"သူရာထူး သစ် မှာ ၉လပဲ ရှိ ပါသေးတယ် ကျွန်တော် တို့ သူ့ကို ထောက် ခံ ပေး ဖို့ လို ပါ တယ်"
credit လက် ရုံး...
မှတ်ချက် ။ ၁နှစ်ပြည့်ရင် တန်းဆင်းမယ်